Coinbase kọwakwuru na Japan
Coinbase ka a mara ọkwa ya atụmatụ ẹkedori ihe ụlọ ọrụ dị na Japan. Na mara ọkwa, Coinbase ha kwuru na ha na-arụ ọrụ na Japanese FSA iji hụ iwu nnabata na bụla ogbo na ozugbo mma, ezube na-enye ha na ngwaahịa na ọrụ ndị mmadụ na Japan.
Na-anabata Fintech Ndú Nao Kitazawa
Dị ka akụkụ nke anyị mgbalị mee ngwangwa ụwa doro nke cryptocurrency, taa anyị na-ezikwa mwepụta nke Coinbase si ụlọ ọrụ dị na Japan. N'okpuru nduzi nke ukwuu-na-akwanyere ùgwù na-enwe mmasị n'ebe fintech ndú, Nao Kitazawa, anyị ọrụ ọhụrụ ga tọọ ntọala maka Japan si kaadị investors iji nweta a nso nke Coinbase si ngwaahịa. Dị ka ndị ọzọ na ahịa, anyị na-eme atụmatụ na-a kpachaara anya obibia anyị rollout na Japan, nke pụtara na-arụ ọrụ aka-na-na-aka na Japanese FSA iji hụ na nnabata na iwu obodo ọ bụla ogbo.
Brazil na-asaghe ọzọ kaadị trading akaụntụ ka omenala brokerage akaụntụ
More ndị mmadụ na-asaghe cryptocurrency trading akaụntụ na Brazil ka omenala brokerage akaụntụ.
A afọ gara aga, mgbanwe akpọ Foxbit nwere Olee ihe enyemaka 100,000 edebanyere ọrụ. taa, ha nwere 400,000 aha ọrụ nke iri na 1.4 nde na meghere akụkọ ha na ha na ha atọ isi asọmpi na-erughị afọ abụọ 'oge. Tụlee na na Olee ihe enyemaka 600,000 nwere ngwaahịa brokerage akaụntụ na ọ bụ doo ahụ: Brazil chọpụtara cryptocurrency. na 2016, Brazil kpaliri $160 nde na nke Bitcoin. Afọ gara aga, ọ kụrụ gburugburu $2.4 ijeri.
"N'ihi na ụmụ okorobịa ndị na-eji na-ezo dollars n'okpuru ha matarasị, ugbu a ha na-ezo ya na Bitcoin,"Na-ekwu Eduardo Ferreira, isi nke International Business na mmepe maka Foxbit na London. "Ọ bụ ụmụ akwụkwọ ịzụ ya. Ọ bụ 60-afọ ụgbọ ala ọkwọ ụgbọala,"Ọ na-ekwu.
Kraken Daily Market Report maka 04.06.2018
$800,054 Ada aba
$150M ahịa gafee ahịa niile taa
Binance jikeere en ...
Previous Post:Blockchain News 04.06.2018